ROM ho an'ny Android, ampanjifao manokana ary araraoty tsara ny findainao | Androidsis (Pejy 2)
MIUI 10 dia mampiseho mpitantana teny miafina tafiditra ao anaty fikirana ao amin'ny beta-ny
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa mpitantana teny miafina vaovao izay efa hita tao amin'ny MIUI 10 beta vaovao ary efa ho avy tsy ho ela.
Ahoana ny fampidinana ny firmware ofisialy ho an'ny terminal Samsung
Lahatsary manazava hahafantarana ny fampiasana ny endrika vaovao amin'ny tranokala sammobile.com ary misintona ny firaketana ofisialy ho an'ny terminal Samsung.
Sintomy ary apetraho ny custom ROM Resurrection Remix 7 miorina amin'ny Android Pie: azo alaina modely maro izao
Android Pie-based Resurrection Remix 7 dia azo alaina amina fampidinana sy fametrahana amin'ny modely finday isan-karazany.
Navoaka ny variant vaovao an'ny Huawei Nova Iza misy RAM 3 GB ary ROM 6 GB
Navoaka ny kinova vaovao an'ny 6 GB RAM ary 128 GB ny toerana fitahirizana anatiny an'ny Huawei Nova Izaia. Safidy loko vaovao ihany koa.
Inona no Odin ary inona no ilana azy
Inona ny Odin ary inona no azontsika ampiasaina azy? Fantaro bebe kokoa momba ity programa Samsung ity izay manome asa fanampiny maro ho an'ny telefaona.
Ireo mpampiasa Huawei manana ROM manokana dia voatery niverina tany amin'ny ROM ofisialy
Huawei dia manery ireo mpampiasa manana ROM manokana hody any am-boalohany. Fantaro bebe kokoa ny olan'ny mpampiasa amin'ny marika Sinoa.
Google dia manomboka manakana ny fiasan'ny fampiharana ao amin'ny fitaovana tsy voamarina
Google dia nanomboka nijanona tsy nilalao moana ary tsy mamela ny fampiasana ny rindranasa sy ny serivisy ao amin'ny terminal izay tsy nohamarinin'ny orinasa.
Raiso ny 4GB RAM Vernee X amin'ny ROM 64GB amin'ny $ 199.99 amin'ny Aliexpress fotsiny
Ny Vernee X 4GB + 64GB dia lafo amin'ny $ 199.99 amin'ny Aliexpress. Ity terminal ity dia manana ny mampiavaka azy eo afovoany, na dia misy endri-javatra tena tsara izay tianao tokoa aza.
Akaiky akaiky ny MIUI 9, te hanandrana azy izao ve ianao?
Ny kinova vaovao an'ny MIUI 9 dia azo alaina ao amin'ny kinova Alfa sy Beta ho an'ireo mpanandramana, raha manana Mi 6 na Redmi Note 4x ianao dia efa azonao andramana izany.
Ahoana ny fanavaozana ny Rom tsy misy fatiantoka data na fampiharana apetraka
Tutorial video tsikelikely izay asehoko anao ny fanavaozana ny Rom raha tsy very angona na rindranasa napetraka ao amin'ny Android-nay.
Tutorial video azo ampiharina Android izay ampianariko anao manavao ny LG G3 amin'ny Android 7.1.2 amin'ny fomba tsy ofisialy miaraka amin'ny Android Rom tsy misy fangarony.
Hiverina amin'ny Pixel Rom V4 aho !!. Ho avy ve ianao?
Rehefa mahita fa tsy mampiasa ny ankamaroan'ny fampiharana Samsung aho dia mitodika any amin'ny Pixel Rom V4 satria io no mitantana tsara ny batterie an'ny Samsung Galaxy S6 Edge +
Rom tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Eto ianao dia manana ny zavatra rehetra ilainao mba hankafizanao izay Rom tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Nosedraina ny MIUI 8.2 izahay, Xiaomi dia mitondra vaovao tena kely
Aorian'ny herinandro iray hampiasana ny kinova MIUI vaovao dia afaka milaza isika fa tsy misy vaovao tena izy, angamba misy fahasamihafana sasany.
Pixel Rom ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ilay Rom izay miditra amin'ny torimaso lalina
Ny Rom izay miditra amin'ny torimaso lalina indrindra ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Android Nougat Rom ofisialy ary tsy mihoatra ny fampiharana Samsung fotsiny.
Ny LineageOS dia nihoatra ny fametrahana mavitrika XNUMX tapitrisa
Nihoatra ny fametrahana mavitrika 500.000 iray volana lasa izay, LineageOS dia efa napetraka amin'ny fitaovana 1 tapitrisa mahery, miaraka amin'ny OnePlus One no mitarika.
Root LinageOS modely Android rehetra
Amin'ity lesona an-tsary ity dia manazava ny fomba ahazoana Root amin'ny LinageOS Android 7.1.1 amin'ny karazana marika sy maodely Android izay nametraka an'i LinageOS aho
Ny zavatra tsapako momba ny Android Nougat ao amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Ireo no fiheverako ny momba ny Rom Nougat voalohany ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Rom izay natolotro anao tamina herinandro lasa teo.
LinageOS ofisialy raha mamela hilalao Pokemon Go sy ny rindranasa izay tsy mandeha amin'ny terminal miorim-paka
Raha mieritreritra ny hanavao ny terminal anao amin'ny LinageOS ianao dia efa manana antony iray hafa ary izany dia satria mamela anao hilalao Pokemon Go i LinageOS izao.
ROM Android Nougat ofisialy voalohany ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ampianarinay anao ny fomba fametrahana azy tsikelikely
Ampianarinay ianao hametraka tsikelikely ny Android Nougat Rom ofisialy voalohany ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus mba hahafahanao mankafy azy io aloha.
Rom tsara indrindra amin'ny Note 5, seranan-tsambo an'ny Note 7 ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Androany aho mitondra anao izay mety ho Rom tsara indrindra noforonina ho an'ny Note 5, seranan-tsambon'ny Note 7 izay ampianariko anao hametraka amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Anio dia asehonay anao tsikelikely ny fanavaozana ny LG G3 mankany amin'ny Android 7.1.1 Nougat, ao anatin'izany ny horonantsary manazava sy ny rohy mankany amin'izay rehetra ilainao hahazoana izany.
Androany izahay dia mampianatra anao hanavao ny LG G2 amin'ny Android 7.1.1 tsy ofisialy ary misaotra ireo Rom an'ny tetikasa LnageOS na izay tonga Cyanogenmod.
ROM LineageOS bebe kokoa navoaka ho an'ny Nexus 6P, 5X, Nextbit Robin ary maro hafa
Toa miloko kokoa ny LineageOS amin'ny famoahana andiana ROM misy ho an'ny terminal isan-karazany.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 dikan-GT-I9300
Androany aho manazava tsikelikely ny fomba fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 Nougat. Tutorial manan-kery ho an'ny modely GT-I9300
Ny Rom tsara indrindra ho an'ny Galaxy S6 Edge Plus dia ny kinova farany NoNaMeRom V9
Izay rehetra ho ahy dia ny Rom tsara indrindra ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus izay manolotra antsika ary koa manazava ny fizotry ny famolavolana ny Rom NoNaMe V9
Google dia manome ADB sy fastboot misy misaraka amin'ny Android Studio sy ny SDK
Manomboka anio dia afaka mampidina ADB sy fastboot avy amin'ny mpizara Google ianao fa tsy maka ny megabytes an'ny Android Studio sy ny SDK.
Azonao atao izao ny misintona ny ROM an'ny Lineage OS tsy ofisialy voalohany
Azonao atao izao ny misintona ireo ROM tsy ofisialy voalohany ho an'ny Lineage OS, izay mandray ny CyanogenMod efa miato amin'ny Android.
Ny Pixel sy Pixel XL dia mety misy ROOT raha nohamafisin'i Google tenany ihany
Nipoitra ny tsaho fa tsy afaka manana tombontsoa ROOT ny Pixels, saingy izao dia nanamafy i Google fa hanana izany izy ireo
Mamadika ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus ho lasa Galaxy Note 7. MAHAFALY !!
Androany dia asehoko anao ny fomba hanovana ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus ho lasa Galaxy Note 7 amin'ny alàlan'ny Rom Port of the Samsung Galaxy Note 7 vaovao.
Ny vondrom-piarahamonina dia efa miasa amin'ny Android Nougat AOSP Rom ho an'ny LG G3. Te hanandrana ve ianao?
Efa manana ny Rom AOSP Android Nougat voalohany ho an'ny LG G3 isika, farafaharatsiny fisedrana na dia amin'ny fanjakana mandroso be aza.
ZTE dia manolotra ny mini Axon 7 miaraka amin'ny efijery HD 5,2 ″, RAM 3GB ary ROM 32GB amin'ny € 299
ZTE dia nanambara ny ZTE Axon 7 Mini miaraka amin'ny efijery 5,2 ", RAM 3GB ary fahatsiarovana anatiny 32GB ho an'ny € 299. Telefaona lehibe ho an'ny" mini ".
Android 7.0 beta ROM ho an'ny famoahana Huawei P9
Raha manana Huawei P9 ianao dia afaka mijanona amin'ny XDA mba hisintona ny beta ROM an'ny Android 7.0 Nougat izay misy ny EMUI 5.0, ilay sosona nohavaozina.
Avadiho ho lasa Nexus ny LG G2 misy anao amin'ny Romana AOSP tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Androany dia mampianatra anao izahay hamadika ny LG G2 ho lasa Nexus 100 x 100 amin'ny alàlan'ny fampidirana ilay Romana AOSP tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Rom tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny LG G2, maodely D800, D802, D805 ary D806
Androany aho dia manolotra izay ho ahy tsy misy isalasalana fa ny Rom tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny LG G2, Rom manan-kery ho an'ny modely d800, d802, d805 ary d806.
Paranoid Android dia miverina amin'ny enta-mavesatra miaraka amin'ny version 6.0
Tsy nisy zavatra fantatra momba ny Paranoid Android hatry ny ela hatramin'ny nivadihan'ny ampahan'ny ekipa ho any OnePlus; ankehitriny manana 6.0 isika.
Ny Rom tsara indrindra ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus dia antsoina hoe NoNaMe Rom v5, asehonay anao ny fomba fametrahana azy !!
Anio dia asehonay aminao ny fomba hametrahana Rom tsara indrindra ho an'ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus, video sy torolàlana an-dahatsary an-dàlana momba ny zavatra rehetra atolotry NoNaMe anay.
N&N Rom Android 6.0 ho an'ny LG G3, iray amin'ireo ROM tsara indrindra ho an'ny LG G3 anao
Androany izahay mitondra anao ny iray amin'ireo Roms fahatsiarovana fotoana ho an'ny LG G3 D855 iraisampirenena sy ny fizotrany dingana tsirairay.
Ahoana ny fametrahana Mokee OS amin'ny LG G3 International. Android 5.1.1
Raha ora vitsy lasa izay dia nanolotra izay ho ahy aho ny Android 6.0 Rom tsara indrindra ho azy ...
Ny Android 6.0 Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2 dia Rom avy amin'ny ekipa Mokee OS ary mahavariana. Mampianatra anao hametraka azy izahay
Androany dia manana voninahitra sy fahafinaretana lehibe aho manolotra aminareo, inona ho ahy manokana, tsy isalasalana fa ny Android 6.0 Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2 maodely D802.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 6.0 Marshmallow
Amin'ity fampianarana azo ampiharina vaovao ity dia hampianatra anao ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 6.0 Marshmallow tsikelikely izahay.
Ny foto-kevitr'i Sony Marshmallow dia ohatra ny amin'ny tokony ho Android
Sony dia mamely ny bokotra havanana amin'ny konsep Marshmallow izay andrana amin'ny Xperia Z3 sy Z3 Compact
Xiaomi dia manakana ny bootloader an'ny Redmi Note 3, ity manaraka ity dia Mi 4c sy Mi Note Pro
Xiaomi, ankoatry ny fanakanana ny bootloder an'ny Redmi Note 3, dia hanao toy izany ao amin'ny Xiaomi Mi 4c sy Mi Note Pro, na dia manolotra fomba famohana aza izy io
Ahoana ny fanavaozana ny LG G3 amin'ny Android 6.0.1 Marshmallow
Anio dia asehonay anao tsikelikely ary miaraka amin'ny fanampian'ny horonantsary iray, ny fanavaozana ny LG G3 ho an'ny Android 6.0.1 Marshmallow noho ny CM13 nightlis.
Ny Rom tsara indrindra ho an'ny LG G3 dia ny AOSP Rom antsoina hoe XenonHD
Androany izahay dia manazava ny fomba fametrahana izay ho ahy no Rom tsara indrindra ho an'ny LG G3 maodely iraisam-pirenena D855, AOSP Rom miorina amin'ny Cyanogenmod 12.1 antsoina hoe XenonHD.
Rom tsara indrindra ho an'ny LG G3: fampisehoana sy bateria mahavariana NovaStock
Androany izahay dia manoro hevitra anao ary mampianatra anao hametraka izay Rom tsara indrindra ho an'ny modely iraisam-pirenena LG G3 d855
Raha manana LG miorim-paka ianao dia afaka mametraka Android 6.0 izao
Ireo tovolahy ao amin'ny XDA dia namoaka fananganana iray hahafahan'ny mpampiasa LG G4 maimaim-poana hanatsara ny Android 6.0M
MIUI 7 dia nanolotra eran-tany miaraka amin'ny ROM ROM azo alaina amin'ny 24 Aogositra
Hugo Barra dia notendrena miaraka amin'ny ekipa MIUI hanolotra ny andiany 7 an'ity kapa malaza ity izay nanome be an'ity mpanamboatra ity.
Sintomy ary apetraho ny ROM 'Concept for Android' an'i Sony amin'ny Xperia Z3
Avy amin'ny XDA ity ROM ity dia tafaporitsaka izay mitondra miaraka aminy ny Sony vaovao ho an'ireo toeram-pamaritana misy azy miaraka amin'ny 'Concept for Android' ary io dia Android Pure ihany.
Ny Rom tsara indrindra ho an'ny Lenovo K3 Note dia ny AOSP Rom avy any Xancin
Androany dia faly aho mampahafantatra anao sy mampianatra anao ny fomba fametrahana ny Rom tsara indrindra ho an'ny Note Lenovo K3.
Ahoana ny fanavaozana ny Lenovo K3 Note amin'ny Android 5.1 amin'ny alàlan'ny Cooked Rom mifototra amin'ny Build 1526 ofisialy
Anio dia asehonay anao ny dingana fanavaozana ny Lenovo K3 Note amin'ny Android 5.1 tsikelikely sy amin'ny horonan-tsary.
Mahagaga !! Rom Evomagix Stock 30E ho an'ny LG G2. Lollipop ofisialy !!
Androany avelako ho anao ny fomba fametrahana izay ho ahy manokana izao dia ny Rom Lollipop tsara indrindra, ny Rom Evomagix Stock 30E ho an'ny LG G2.
Port LG G4 manaitra ho an'ny LG G2 ChelozTeam UX 4.0 Mahatalanjona !!
Androany dia manoro hevitra anao izahay ary mampianatra anao ny fomba hametrahana ity Port LG G4 manaitra amin'ny LG G2 ity
(Navoaka navaozina) Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S2 mankany amin'ny Android 5.1.1 Lollipop
Anio dia asehonay anao ny fomba marina hanavaozana ny Samsung Galaxy S2 mankany amin'ny Android 5.1.1 Lolllipop ary hanome fiainana vaovao an'ity terminal Android manaitra ity.
Mampiaiky !! Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Tab 7 mankany amin'ny Android 5.1.1 Lollipop (modely P1000)
Na dia toa tsy mampino aza izany dia asehonay anao tsikelikely ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Tab 7 Android 5.1.1
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung galaxy S3 amin'ny Android 5.1.1
Anio dia hasehoko anao ny fomba fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 5.1.1 noho ny Rom Lollipop manaitra ao amin'ny kinova farany noforonin'ny Team Resurrection Remix.
[Lahatsary] Ahoana ny famelomana indray ny Rom Lollipop mifototra amin'ilay iray ofisialy ao amin'ny LG G2
Amin'ity lesona manaraka ity izay tohanan'ny video tsikelikely dia hasehoko anao ny fomba famelomana indray Android Android Lollipop Rom amin'ny LG G2.
Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 mankany amin'ny Android 5.1.1 Lollipop
Androany aho dia manoro hevitra ny Rom tsara indrindra hanavao ny LG G2 mankany amin'ny Android 5.1.1 Lollipop ankoatry ny fampianarana anao ny endri-javatra rehetra sy ny fomba fametrahana ary flashing.
LG G2: Ahoana ny fomba hiverenana any amin'ny kit kit na AOSP Rom amin'ny Android Lollipop
Androany aho manazava tsikelikely an'ireo mpampiasa LG G2: Ahoana ny fiverenana amin'ny Stock Kit Kat Rom.
Ny fomba tsara indrindra hanavaozana LG G2 amin'ny Android Lollipop ofisialy
Anio no asehoko anao ny fomba tsara indrindra hanavaozana ny LG G2 amin'ny Android Lollipop ofisialy nefa tsy very fanarenana na Root, noho ity Rom manaitaitra avy amin'ny Evomagix ity.
Natsangana tamin'ny maty ny Google Google Apps Paranoid
Vaovao mahafaly ho an'ireo rehetra te-hametraka ROM amin'ny fitaovany Android ary izany dia tafatsangana amin'ny maty ny Google Paranoid Google Apps.
Ny ROM an'ny OnePlus One, OxygenOS, efa misy izao
OxygenOS, ilay ROM novokarin'ny OnePlus ary natao manokana ho an'ny fitaovanao OnePlus One, dia azo sintonina izao.
Paranoid Android dia manao veloma ny Google Apps azy manokana
Ny vondrona mpamorona Paranoid Android dia nanambara fa hijanona tsy hanohana ny Google Apps azy manokana izy ireo.
[ROM] Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android Official Stock Lollipop amin'ny alàlan'ny Cooked Rom
Androany izahay manome anao ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanavaozana ny LG G2 amin'ny stock Android Lollipop ofisialy, ny fomba tsy misy hafa dia ny amin'ny alàlan'ny Rom masaka mifototra amin'ny firmware Android 5.0.1 LG Lollipop voalohany
[Video] LG G2: Ahoana ny fiverenana mankany amin'ny Kit Kat Rom ofisialy avy amin'ny Android Official Lollipop nefa tsy mila Flash Tools
Ahoana ny fiverenana amin'ny LG G2 D802 avy amin'ny Android Lollipop mankany amin'ny Android Kit Kat ofisialy raha tsy mila Flash Tools ary tsy very Recovery na Root.
[Video] Ahoana ny fametrahana CM11 ao amin'ny Xiaomi RedMi Note 4G miaraka amin'ny Xperience Note avy amin'i Xancin
Ahoana ny fametrahana CM11 amin'ny Xiaomi RedMi Note 4G tsikelikely noho ny Xancin avy amin'ny forum mobileSSIM.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S2 amin'ny Android Lollipop
Androany aho dia manazava tsikelikely ny fomba fanavaozana ny Samsung Galaxy S2 amin'ny Android Lollipop noho ny seranan-tsambo CM12, izay hanome fotoana faharoa ho an'ity terminal Samsung manaitra ity.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android Lollipop
Androany aho manazava ny fomba hanomezana fiainana vaovao ny terminal Android anao ary asehoko anao ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android Lollipop amin'ny fampiasana CM12.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S4 amin'ny Android Lollipop amin'ny fampiasana CM12
Androany aho manazava ny fomba fanavaozana ny Samsung Galaxy S4 amin'ny Android Lollipop amin'ny fampiasana ROM ofisialy Android 5.0 Nightlys avy amin'ny CM12.
Ahoana ny fanavaozana ny LG G3 amin'ny Android 5.0 CM12 [Model D855]
Androany aho dia manazava ny fomba fanavaozana ny LG G3 amin'ny Android 5.0 Lollipop amin'ny fampiasana Cyanogenmod 12, CM12
Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 mankany Android 5.0 amin'ny fampiasana Cyanogenmod 12
Androany dia asehoko anao ny fanavaozana ny LG G2 mankany Android 5.0 noho ny CM12
Ny Material Design dia tonga ao amin'ny CyanogenMod 12 miaraka amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra vaovao sy mpilalao mozika
Ny CyanogenMod 12 dia havoaka amin'ny faran'ity taona ity ary mitondra miaraka aminy Design Material, ary ny fanavaozana ny rindranasan-kafatra hafatra sy mozika
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Note 2 amin'ny Android Lollipop
Tutorial amin'ny zavatra ilainao rehetra mba hanavaozana ny Samsung Galaxy note 2 amin'ny Android Lollipop
LiquiSmooth, Rom Android 5.0 Lollipop ho an'ny LG G2 (ny karazany rehetra)
Eto ianao dia manana ilay iray fa raha ny hevitro manokana dia ny Android 5.0 Lollipop Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2 ny karazany rehetra.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S5 amin'ny Android Lollipop amin'ny fampiasana CM12
Androany dia asehoko anao ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S5 mankany Android Lollipop amin'ny alàlan'ity Rom Cyanogenmod 12 Alpha voalohany ity
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Note 3 amin'ny Android Lollipop tsikelikely
Ahoana ny fametrahana tsy ara-dalàna ny Android Lollipop amin'ny Samsung Galaxy S4
Efa manana Rom voalohany ao amin'ny fanjakan'ny Alpha Android an'ny Android Lollipop isika ao amin'ny maodelim-pirenena Samsung Galaxy S4 GT-I9505.
Android 5 Lollipop Roms ho an'ny Nexus 4, 5, 7, 10 ary Xperia Z
Ry mpandrindra XDA, ento anay ny Rom voalohany amin'ny fanavaozana ny rafitra fiasa Google, Android 5 Lollipop, andrana andrana izy ireo.
LG G2 Roms: Miui V5 4.10.24 miorina amin'ny stock an'ny LG D80220C tany am-boalohany
Eto ianao manana ny horonan-tsary sy ny fizotry ny fametrahana azy rehetra ahafahanao misintona sy manandrana Miui V5 4.10.24 miorina amin'ny Stock D80220C ho an'ny LG G2 anay.
CyanogenMod dia manana lesoka fiarovana azo antoka
CyanogenMod sy ny ROM azo avy aminy dia manana dallo fiarovana mampidi-doza izay mamela ny fidirana amin'ny finday finday avo lenta
Sony milalao miaraka amin'ny fahafaha-mitondra Android madio amin'ny fitaovana avo lenta
Raha nandefa ny terminal-ny i Sony miaraka amin'ny safidy hametrahana Android madio, azo antoka fa hahazo ny fahatokisan'ireo mpampiasa vaovao izy
Mametraha rom amin'ny alàlan'ny Chrome noho ny ChromeADB
Ny fametrahana roms noho ny mpizara ADB dia efa nandroso saingy mbola sarotra ho an'ireo vao manomboka, ny ChromeADB dia manamora ary manao azy amin'ny sary.
Roms LG G2: Mametraka sy manandrana ny Port 7Rom an'ny LG G3
Androany ao amin'ny fizarana Roms LG G2 dia tianay aseho anao ny fomba fametrahana 7Rom, seranan-tsambo an'ny LG G3 ary koa ny boot sy ny endri-javatra voalohany.
Ny Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2 dia antsoina hoe Cloudy ary seranan-tsambo an'ny LG G3
Eto aho dia mamela anao izay nampanantenaina tamin'ny fitsapana an-tsary ny LG G2 vs LG G3, ilay Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2 izay tsy iza fa ny seranan-tsambon'ny LG G3 namboarin'ny ekipa Cloudy G3.
Ahoana ny fametrahana ny Rom an'ny OnePlus One amin'ny LG G2 international
Eto ianao dia manana ny rakitra rehetra ary ny fomba fametrahana dia nanazava tsikelikely hametrahana ity OnePlus One Port amin'ny LG G2 iraisam-pirenena.
[ROM] Ahoana ny fomba hanovana ny LG G2 ho LG G3
Eto ianao dia manana ny horonan-tsary sy ny maodely fametrahana iray amin'ireo romana LG G3 tsara ampitaina ary fomba tsara hanovana ny LG G2 ho LG G3.
Sony dia mamoaka ny bootloader an'ny fitaovana Xperia
Nanapa-kevitra ny hamoaka ny bootloader an'ny fitaovany i Sony, manome fotodrafitrasa ho an'izay maniry hanao izany, satria efa ela no natao tamin'ny Motorola Moto G
Paranoid Android dia mamoaka kinova 4.5 Alpha 1 miaraka amina interface interface Android L farany
Ny interface apps Android L vao haingana dia toa mitovitovy amin'ny alfa Paranoid Android 4.5
[APK] Miui Experience na ny fomba fitsapana Rom Miui nefa tsy mila mamaka na manaisotra na inona na inona
Eto ianao dia manana fonosana fangatahana hizaha toetra ny Miui Experience nefa tsy mila miorim-paka, fa tsy mamoaka na inona na inona mihitsy.
Ampidino ny safidy fampandrosoana amin'ny Android Wear
Asehonay aminao ny fomba hampiasana ny safidy fampandrosoana ao amin'ny Android Wear mba hanokafana ny famantaranandronao amin'ny fahafaha-mametraka ROM
Ahoana ny famahana ny olan'ny fanidiana fanakatonana an-tery aorian'ny fanavaozana ny Rom Cyanogenmod anao
Eto ianao dia manana fanamboarana tsotra hamahana ny olan'ny fanidiana fanidiana an-tery aorian'ny fanavaozana ny Rom Cyanogenmod anao.
Ahoana ny fametrahana Gohma ROM amin'ny LG G Watch
Gohma ROM no ROM manokana natokana ho an'ny Android Wear ary ny voalohany koa ho an'ny LG G Watch izay manatsara ny bateria sy ny fahombiazan'ny famantaranandro.
Toa ny Android L misaotra an'i Xposed
Asaivo ny interface graphic an'ny Android L nefa tsy mila manova rom noho ny Xposed Framework sy GELS, ilay modely Xposed izay manova ny Android-nao.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Tab 7, maodely P1000 mankany Android 4.4.4
Avy eo hazavaiko ny pitsopitsony rehetra mba hanavaozana ny Samsung Galaxy Tab 7 mankany Android 4.4.4 KitKat izay hitanao amin'ny kodiarana video tonga lafatra.
Ny kinova farany an'ny Paranoid Android 4.4 dia misy ankehitriny
Ny kinova farany an'ny Paranoid Android 4.4 dia azo alaina ao amin'ny tranokala an'ity ROM hafa mahaliana ity
CyanogenMod dia manampy fampiharana voaro, fampandrenesana mitsingevana ary maro hafa
CyanogenMod dia mitondra serivisy sy fampiharana bebe kokoa amin'ny ROM hafa mahavariana ho an'ny filaminana sy fampandrenesana amin'ny ankapobeny
Mitandrema, aza apetraka ny WhatsApp beta farany raha manana terminal miaraka amin'i Rom Cocinada ianao
Raha mpampiasa manana Android ianao noho ny Roms nandrahoina maro, dia tokony hitandrina ianao mba tsy hametraka ny WhatsApp beta farany farany.
Skip Samsung! ary havaozy ny Galaxy S3 mini amin'ny Android 4.4.3
Eto ianao dia manana tutorial feno tsikelikely mba hahafahanao mahita ny fomba fanavaozana ny Galaxy S3 mini amin'ny Android 4.4.3, na firy na firy ny eritreritr'i Samsung.
Vaovao farany LG G2 ho an'ny Android 4.4.3 amin'ny OmniRom
Androany dia asehoko anao ny fanavaozana ny LG G2 mankany Android 4.4.3 amin'ny alàlan'ny OmniRom, iray amin'ireo ROM AOSP tsara indrindra izay hitantsika ho an'ny G2 anay.
Ahoana ny fanavaozana ny iFive Mini 3GS amin'ny Android 4.4
Fomba fanao tena tsotra harahina raha te hanana Android 3 ao amin'ny iFive Mini 4.4GS isika.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S4.4.3 International (GT-I3) mankany Android 9300
Miverina tsikelikely tutorial aho izay anolorana anao izay rehetra ilainao hanavao ny Samsung Galaxy S4.4.3 anao amin'ny Android 3.
Apetraho ny fampiharana Xperia Z2 Walkman amin'ny Deodexed Rom
Eto ianao manana ny zip ny fampiharana Walkman an'ny fonosana Xperia Z2 hampiasaina amin'ny Roms Deodexed.
Miui V5 amin'ny teny espaniola ho an'ny LG G2 dia efa zava-misy
Eto ianao no manana Rom Miui V5 voalohany amin'ny teny espaniola ho an'ny LG G2 miasa tanteraka ary 100 x 100 miasa.
Mandidy ny baiko Google Now amin'ny OmniRom
OmniRom dia te-hanome fihodinana amin'ireo baikon'ny feo Google Now ary, araka ny hitantsika amin'ny horonantsary, dia toa nahomby izy ireo.
Roms ho an'ny LG G2: ArdeDevTeam V2 Ilay Rom Kit Kat amin'izao fotoana izao
Eto ianao dia manana ny iray amin'ireo ROM tsara indrindra ho an'ny LG G2, ArdeDevTeam V2 miaraka amin'ny asan'ny Lg G Pro 2 sy G Flex.
Fanatsarana fampiasa amin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy S3 mankany KitKat miaraka amina Rom AOSP tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Noho ny fanapaha-kevitr'i Samsung tsy hanavao ny S3 ho Android KitKat anio dia asehoko anao ny fomba hanatsarana amin'ny fomba ôfisialy ny Samsung Galaxy S3 mankany KitKat.
Avadiho ho lasa Nexus 2 misy vitamina miaraka amin'ny Madhi Rom ny LG G5 anao
Manaraka izany dia asehoko anao ny fomba fanovana ny LG G2 ho lasa Nexus 5 misy vitamina amin'ny alàlan'ny Rom Kit Kat AOSP na Android madio antsoina hoe Madhi Rom.
Rom Assics V4 Plus. Ny Rom Kit Kat tsara indrindra amin'ny LG G2
Androany dia tiako ny mamela anao ny fametrahana fomba izay ho an'ny mpampiasa maro ny Android Rom Kit Kat tsara indrindra ho an'ny LG G2.
Ny Samsung Galaxy S5 ROM dia mampiasa tahiry anatiny 8GB
Ao amin'ny kinova 16GB an'ny Galaxy S5, ny antsasaky ny fitehirizana anatiny dia ho entin'ny ROM, ka mila karatra microSD hanitarana azy.
Samsung Galaxy S4, Rom Miui v5 Android 4.2.2 avy amin'i Manyopoli83
Eto aho mamela anao ity Rom manaitra ity noho ny asan'ny Manyopoli83 ho an'ny Samsung Galaxy S4 ary miaraka amin'ny tombony rehetra azo avy amin'ny zavatra niainana Miui V5.
Miui Rom V5 ho an'ny Samsung Galaxy S3
Eto ianao manana ity Rom Miui V5 manaitra ho an'ny Samsung Galaxy S3 ity. Rom noforonin'ilay chef Manyopoli83 manaitra avy amin'ny HTCmania.
Miui Manamafy ny fanavaozana ny Roms ho an'ny Android 4.4 Kit Kat amin'ny volana Febroary 2014
Mahazo ny vaovao avy amin'ny Sun Peng, lehiben'ny injenieran'ny Miui izahay, fa havaozina amin'ny Android 4.4 Kit Kat ny volana febroary ho avy izao.
Samsung Galaxy S4: misy fanavaozana ofisialy vaovao amin'ny Android 4.4.2 misy
Eto izahay dia manana fanavaozana ofisialy ny Android 4.4.2 Kit Kat ho fitsapana ary amin'ny alàlan'ny Odin ihany ho an'ny modely Samsung Galaxy S4 GT-I9505.
Ny cyanogenmod Installer dia misy amin'ny MAC izao
Ireo tovolahy ao Cyanogenmod dia namoaka kinova Cyanogenmod Installer ho an'ny MAC OSX vaovao.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Tab 7 P1000 amin'ny Android 4.4 Kit Kat
Fampianarana tsikelikely hanavao ny modely Samsung Galaxy Tab 7 P1000 mankany amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat.
Samsung Galaxy Note 3, fanavaozana ofisialy ny Android Kit Kat 4.4.2
Fampianarana iray isaky ny dingana hanatsarana ny Samsung Galaxy Note 3 N9005 mankany amin'ny Android 4.4.2 ofisialy.
Samsung Galaxy S4, havaozina amin'ny Android 4.4.2 amin'ny alàlan'ny Google Edition
Eto ianao dia manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S4 amin'ny kinova Android farany amin'ny alàlan'ny fonony Rom an'ny Samsung Galaxy S4 Google Edition
Samsung Galaxy S3, Fanavaozana ny Android 4.4.2 amin'ny alàlan'ny Cyanogenmod 11
Eto ianao manana ny pitsopitsony rehetra hanavaozana ny Samsung Galaxy S3 tsy ofisialy amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat miaraka amin'ny Cyanmogenmod 11 Rom farany.
Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat amin'ny fampiasana ParanoidAndroid
Fampianarana iray isaky ny dingana miaraka amin'ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fanavaozana ny LG G2 mankany amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat avy amin'ny ParanoidAndroid.
Torohevitra hotadidina ao an-tsaina alohan'ny hametrahana terminal Android
Ny fitandremana sy ny torohevitra lehibe tokony horaisina alohan'ny handefasana ny terminal Android anao.
Samsung Galaxy S3, Android 4.3 Open Europe firmware ho azo alaina
Eto ianao manana ny firmware Android 4.3 Open Europe farany indrindra ho an'ny modely Samsung Galaxy S3 GT-I9300.
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.4 Kit Kat an'i Mokee
Eto ianao dia manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fanavaozana ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000 amin'ny kinova farany an'ny Android 4.4.1 Kit Kat mampiasa ny Mokee OS.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S2 amin'ny Android 4.4 Kit Kat miaraka amin'ny CyanogenMod 11
Eto ianao dia manana lesona iray isaky ny dingana ilaina amin'ny fanavaozana ny maodely Samsung Galaxy S2 GT-I9100 amin'ny kinova farany an'ny Android 4.4 Kit Kat
Eto aho dia mitondra anao ity Rom manaitra ho an'ny modely Samsung Galaxy S3 GT-I9300 miorina amin'ny Android 4.4.1 Kit Kat.
Samsung Galaxy S4, Rom Android 4.4 Fanontana Google GT-I9505G
Eto aho mitondra anao seranan-tsambo an'ny Google Edition Rom ofisialy ho an'ny Samsung Galaxy S4 miaraka amin'ny Android 4.4 Kit Kat.
Eto ianao manana Android 4.4 Kit Kat Rom mahavariana ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000.
LG G2, Android 4.2.2 Rom miaraka amin'ny fiasa LG G-Flex
Omeko anao ny fomba hametrahana ity Android 4.2.2 Rom miorina amin'ny firmware LG ofisialy izay hanisy ireo fiasa vaovao an'ny LG G-Flex ao amin'ny LG G2.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Note 2 amin'ny Android 4.4 Kit Kat miaraka amin'ny OmniRom
Fampianarana tsikelikely hanavaozana tsy ofisialy ny Samsung Galaxy Note 2 mankany amin'ny Android 4.4 Kit Kat noho ny OmniRom.
Samsung Galaxy Note 1, manavao ny Android 4.4 Kit Kat miaraka amin'ny OmniRom
Fampianarana hanavao ny Samsung Galaxy Note 1 mankany amin'ny Android 4.4 Kit Kat amin'ny fampiasana OmniRom
OmniRom Android 4.4 Kit Kat ho an'ny Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Tutorial tsikelikely hanavao ny Samsung Galaxy S3 mankany Android 4.4 Kit Kat miaraka amin'ny OmniRom.
OmniRom dia manolotra fanohanana amin'ny fanavaozana ny Android 4.4 Kit Kat amin'ny fomba tsy ofisialy
OmniRom dia manolotra fanampiana ho an'ny terminal Android 15 izay afaka manavao ny Android 4.4 Kit Kat amin'ny alàlan'ny alim-baravarany.
Samsung Galaxy Note 1 dia hanana Android 4.4 Kit Kat
Fampianarana feno miaraka amin'izay ilainao rehetra mba hanavaozana ny modely Samsung Galaxy Note 1 GT-N7000 amin'ny Android 4.4 Kit Kat amin'ny fampiasana ParanoidAndroid 4.0.
Samsung Galaxy S4, ahoana ny fanavaozana azy amin'ny Android 4.4 Kit Kat tsy ofisialy
Fampianarana feno miaraka amin'izay ilainao rehetra hanavaozana tsy ofisialy ny modely Samsung Galaxy S4 GT-I9505 mankany Android 4.4 Kit Kat.
Fanavaozana Android: Fanavaozana tsy ofisialy na fiandrasana fanavaozana ofisialy izay tsy tonga mihitsy?
Ny politikan'ny fanavaozana Android mahatsiravina dia nahatonga ahy hanoratra ity lahatsoratra ity hanazava ny mahatsara sy maharatsy ny fanavaozana tsy ofisialy.
Ahoana ny fomba fanavaozana tsy ofisialy LG G2 amin'ny Android 4.3.1
Fampianarana iray isaky ny dingana amin'ny zava-drehetra ilainao manavao ny LG G2 mankany Android 4.3.1 amin'ny alàlan'ny Rom Nightly avy amin'ny CyanogenMod 10.2.
Vahaolana amin'ny hadisoana amin'ny fanarenana rehefa manandrana mametaka Android 4.4 Kit Kat Rom ianao
Vahaolana hita ao amin'ny XDA handefasana Rom Android 4.4 Kit Kat tsy mila manavao ny fanarenana.
LG Optimus G, Rom CM11 Android 4.4 Kit Kat tsy ofisialy
Rom Android 4.4 Kit Kat manaitra ho an'ny LG Optimus G E975 tohanan'ny hevitra ao amin'ireo dinika fampandrosoana Android samihafa.
Eto ianao dia manana rom mampientam-po iray hafa ho an'ny modely tsy mitongilana Samsung Galaxy S GT-I9000 miaraka amin'ny Android 4.4 Kit Kat misaotra an'i MacKay.
Samsung Galaxy S4, ProBAM iray amin'ireo ROM Android 4.3 tsara indrindra
ProBAM angamba dia iray amin'ireo ROM tsara indrindra amin'ny Android 4.3 izay hitantsika amin'ny Samsung Galaxy S4 amin'ny maodeliny sy ny karazany rehetra.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Note 2 International amin'ny ofisialy Android 4.3
Eto aho no mitondra anao fimware Samsung Android 4.3 ofisialy voalohany ho an'ny modely iraisam-pirenena Samsung Galaxy Note 2 N-7100.
Ahoana ny fomba fanavaozana tsy ofisialy ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 4.4 Kit Kat
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 4.4 Kit Kat amin'ny alàlan'ny Rom Cyanogenmod 11.
Ny installer Cyanogenmod dia azo alaina izao
Efa manana eto izahay CyanogenMod Installer mifanaraka amin'ny Windows ary mety amin'ny terminal Android marobe.
Samsung Galaxy S, Android 4.4 Kit Kat amin'ny kinova Alpha
Efa ananantsika eto ny ROM voalohany azo alaina amin'ny beta ho an'ny Samsung Galaxy S tsy misy afo, romana avy amin'ny ekipan'ny OmniRom.
Samsung Galaxy S3 mini, Rom Android 4.4 Kit Kat voalohany ao amin'ny fanjakan'ny Alpha
Izahay dia efa manana Android 4.4 Kit Kat rom voalohany ho an'ny Samsung Galaxy S3 mini amin'ny kinova Alpha.
Samsung Galaxy S3, Rom voalohany amin'ny kinova Alpha miaraka amin'ny Android 4.4 Kit Kat
Efa ananantsika eto ny Rom voalohany miaraka amin'ny Android 4.4 Kit Kat ho an'ny modely Samsung Galaxy S3 GT-I9300.
Samsung Galaxy S4, fanavaozana ofisialy ny Android 4.3 Espaniola tsy misy mpandraharaha.
Efa manana eto izahay ho an'ny fisintomana mivantana sy fanavaozana amin'ny alàlan'ny Odin ny firmware Android 4.3 ofisialy ho an'ny modely Samsung Galaxy S4 GT-I9505.
Samsung Galaxy S3, Android 4.3 Rom miaraka amin'ny Android 4.4 Kit Kat Apps rehetra
Iray amin'ireo Romana tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny Samsung Galaxy S3 napetraka tao amin'ny CM10.2 ary miaraka amin'ireo rindranasa Google an'ny Android 4.4 Kit Kat.
Ahoana ny fanavaozana ny LG Optimus G amin'ny Android 4.4 Kit Kat
Ity ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hanavaozana ny LG Optimus G amin'ny Android 4.4 Kit Kat.
Misintona Android 4.3 ofisialy ho an'ny Samsung Galaxy S3 (tsy misy KNOX)
Fampidinana sy fomba fametrahana ny leaked Firmware Android 4.3 vaovao ho an'ny Samsung Galaxy S3.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy Nexus amin'ny Android 4.4 Kit Kat
Ho an'ny fiadanan-tsain'ny mpampiasa rehetra an'ny Samsung Galaxy Nexus Maguro, dia efa eto amintsika ny Rom voalohany amin'ny kinova Alpha miaraka amin'ny Android 4.4 Kit Kat.
Samsung Galaxy S, Android 4.3.1 miaraka amin'ny Slim Bean
Iray amin'ireo Romana tsara indrindra amin'izao fotoana izao amin'ny Android 4.3.1 ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S4 amin'ny Android 4.3 fa tsy misy KNOX
Original Samsung Android 4.3 Rom ho an'ny Samsung Galaxy S4 fa tsy misy KNOX
Cyanogenmod dia manjelatra amin'ny Samsung Galaxy Note 3
Ny mpanara-dia an'i Cyanogenmod rehetra dia ao anaty vintana avokoa satria nalefa tamin'ny Samsung Galaxy Note 3
Android 4.3.1 amin'ny Samsung Galaxy S miaraka amin'ny Mokee OS
Andianteny vaovao an'ny Mokee OS izay ahafahantsika manavao ny Samsung Galaxy S mankany amin'ny Android 4.3.1 izay ny Android farany.
ROM Installer na ny fomba fametrahana rom mora novaina
ROM Installer dia fitaovana JRummy vaovao mamela anao hametraka rôma amin'ny katalaogy lehibe tsy misy fahasarotana.
Samsung Galaxy S4, rindrambaiko nivoaka farany an'ny Android 4.3
Efa misy eto amintsika ny firmware Android 4.3 vaovao ho an'ny Samsung Galaxy S4 izay efa toetra ofisialy.
Androany aho dia manolotra ny kinova RC2 an'ny ParanoidAndroid 3.99 Rom ho an'ny Samsung Galaxy S2, izay mety ny Android 4.3 Rom tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Samsung Galaxy S, Rom SlimBean Android 4.3 kinova isan-kerinandro
Rom manaitra iray hafa ho an'ity terminal tsy misy afo ity avy amin'ny Samsung, ny Samsung Galaxy S ao amin'ny kinova GT-I9000.
Iray amin'ireo Romana tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny modely Samsung Galaxy S3 GT-I9300, miaraka amin'ny Android 4.3 AOSP.
Samsung Galaxy S, Rom Joyos Android 2.3.7 iPhone Style miaraka amina fampiharana FM Radio miharo
Ity rom ho an'ny Samsung Galaxy S, maodely GT-I9000 ity dia manome antsika ny endrika feno sy mahatoky an'ny rafitra fiasan'ny Apple iOS.
Fomba fampiasana GooManager hanavaozana ny Rom anao
Fampianarana tsikelikely hanavaozana ny Rom masinayinay amin'ny alàlan'ny GooManager.
Samsung Galaxy S3, Rom Android 4.3 JellyBam manaitra
Eto aho dia manolotra ny asa farany nataon'ny ekipa JellyBam ho an'ny Samsung Galaxy S3, Rom miorina amin'ny Android 4.3 miorina tanteraka.
Ahoana ny fanavaozana ny LG Optimus G amin'ny Android 4.3
Fampianarana tsikelikely hanavao ny LG Optimus G amin'ny Android 4.3 amin'ny fampiasana Cyanogenmod 10.2 rom
Samsung Galaxy S3, Rom Android 4.2.2 Fampisehoana Nexus
Rom manaitra amin'ny Android 4.2.2 ho an'ny Samsung Galaxy S3 amin'ny fomban'ny Google's Motorola X
Manomboka anio dia azonao atao ny mampihetsika ny kaonty CyanogenMod hitadiavana ny terminal ary hamafana ireo angona lavitra
Ny kaonty CyanogenMod dia manolotra ny hamafana ny angona avy amin'ny telefaonintsika na hamantatra izany hatrany na dia avy amin'ny tranokala CM ofisialy aza.
Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny habaka amin'ny LG L3 E400
Fampianarana azo ampiharina amin'ny alàlan'ny fametrahana rom miaraka amin'ilay Sdmerge tafiditra mba hamahana ireo olan'ny habakabaka amin'ny LG L3 E400.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S2 amin'ny Android 4.3
Fampianarana iray isaky ny dingana amin'ny zavatra rehetra ilainao mba hanavaozana tsy ofisialy ny Samsung Galaxy S2 mankany Android 4.3.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 4.3
Fampianarana feno amin'ny zavatra ilainao rehetra mba hanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 4.3 amin'ny fampiasana rom masaka miorina amin'ny Cyanogenmod 10.2
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S4 amin'ny Android 4.3
Fampianarana tsikelikely hanavao ny Samsung Galaxy S4 ho an'ny Android 4.3 madio miaraka amina romana AOSP Google Edition.
Samsung Galaxy S, ahoana ny fanavaozana azy amin'ny Android 4.3 amin'ny Rom Paranoid 3+
Ahoana ny fanavaozana ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000 amin'ny tsimbadika farany amin'ny Android 4.3 tsikelikely.
Ny zava-drehetra momba ny kaonty CyanogenMod hanarahana sy hamafana ny angona findainao very
Ny kaonty CyanogenMod dia hanome anao safidy hanaraha-maso sy hamafana ny angona amin'ny findainao raha very azy ianao na any am-pelatanan'ny olon-kafa izany.
Ny rafitra Halo 2.0 multitasking ao amin'ny tsimbadika vaovao an'ny Paranoid Android ROM
Mila manana ny kinova Paranoid Android farany ianao hahafahana mampiasa ny kinova Halo 2.0 vaovao sy ny fampiasa tsara omeny amin'ny Android.
Navoaka ho an'ny fitaovana sasany ny CyanogenMod 10.2
Anjaranao CyanogenMod no mitondra ny Android 4.3 amin'ny ROM miaraka amin'i CyanogenMod 10.2, aparitaka amin'ny fitaovana sasany ary hiseho bebe kokoa izany.
Mametraka mora foana ny fanamboarana novaina amin'ny terminal Android maro
Fampiharana maimaimpoana tanteraka izay hanamora ny fametrahana ilay fanarenana novaina fatratra amin'ny terminal Android anay
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2.2 Mako Xperience miaraka amin'i Elitemóvil's Linaro
Ny maodely Samsung Galaxy S GT-I9000 dia mandà ny handao ny tontolon'ny Android ankehitriny ary havaozina noho ity Elite Rom mahafinaritra ity.
Samsung Galaxy S3, ny fomba hanomezana azy ny endrika sy fiasan'ny Samsung Galaxy S4
Ity fampianarana vaovao ity ho an'ny Samsung Galaxy S3, azonao atao ny manova azy amin'ny Samsung Galaxy S4 vaovao na amin'ny endrika ivelany na amin'ny fiasa manokana.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S amin'ny Android 4.2.2 amin'ny Cyanogenmod 10.1 RC4
Fampianarana azo ampiharina amin'ny fomba fametrahana ny kinova RC4 an'ny Cyanogenmod amin'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000
Cyanogenmod 10.1 RC4 dia azo alaina mivantana izao
Efa manana eto izahay ny kinova Android 4.2.2 an'ny Cyanogenmod 10.1 RC4 ho an'ny fisintomana mivantana sy fifaliana maimaimpoana.
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2.2 Chameleon OS, rivotra madio ho an'ny Galaxy
Rom vaovao mahatalanjona ho an'ny modely tsy misy afo Samsung Galaxy S GT-I9000, Chameleon OS miaraka amina endrika vaovao marobe.
Cyanogenmod 10.1 RC1 dia azo sintonina izao
Cyanogenmod dia namoaka ny Candidate Release voalohany, na Cyanogenmod RC1 miorina amin'ny Android 4.2.2 ho an'ny fitaovana mifanentana maro.
Auto Flasher ROM flash utility, fampiharana ilaina ho an'ireo mpidoroka tselatra
Auto Flasher ROM flash utility dia fitaovana iray hanamora ny fandefasana rakitra avy amin'ny TWRP
Samsung Galaxy S, JDQ39E Android 4.2.2 rom, ny fiverenan'i Elitemóvil
Eto ianao dia miandry ny fiverenan'ny chef tsara indrindra amin'ny sehatra Android ho an'ny Samsung Galaxy S, miaraka amin'ny rom vaovao miorina amin'ny Android 4.2.2
Sotmax roms Stock ho an'ny Samsung Galaxy S3
Sotmax Rom ho an'ny modely Samsung Galaxy S3 GT-I9300 dia rom mifototra amin'ny Samsung Stocks miaraka amina fampiasa vaovao maro eken'ny Kies.
Rom spectacular ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000 miaraka amin'ny Android 4.2.2 ary tsiro roa azo isafidianana.
Samsung Galaxy S3, ROM MIUI Android 4.1.1 avy amin'ny Manyopoli83
Rom romotra ho an'ny Samsung Galaxy S3 ported sy novain'ny muchopoli83 miorina amin'ny Android 4.1.1 ary miorina amin'ny MIUI V5
Orange Backup Root, ny nandroids anao dia manome backup mivantana any amin'ny rahona
Orange Backup Root dia fitaovana rafitra maimaimpoana mamela antsika, ankoatry ny zavatra maro hafa, hanao kopia voafafa amin'ny rafitra Android
Fandefasana seranana Samsung Galaxy S4 ho an'ny fitaovana rehetra
Efa manana ny seranan-tsambo ny Launcher Samsung Galaxy S4 vaovao azo alaina sy fametrahana ary mifanentana amina terminal maro be izahay
Samsung Galaxy S, Neon Kernel V 0.3 ho an'ny Android 4.2.1 miaraka amin'ny fanohanan'ny OTG
Ahoana ny fanovana ny Kernel amin'ny Samsung Galaxy S eo ambanin'ny romana Android 4.2.1 nahandro
Sintomy ny fampiharana Sony Xperia Z tompon-tany
Fonosana fampiharana teratany an'ny Sony Xperia Z hamaky amin'ny alàlan'ny fanarenana manan-kery ho an'ny terminal Android marobe
Xperia S, Rom XS B-Room version 5.1
Androany izahay mitondra anao ny Elroysde XS B-Room kinova 5.1 ho an'ny Sony Xperia S, miorina amin'ny rindrambaiko ofisialy farany ofisialy Sony ary feno fanaingoana sy fahaiza-miasa.
Ny CyanogenMod Nightlies dia mampiditra ny PIE Control
Ny mpandrindra CyanogenMod dia nanapa-kevitra ny hampiditra ny PIE Control ao amin'ireo kinovan'ny roms-n'izy ireo amin'ny nightlies.
Androany izahay dia mitondra RomAur v1.4.1 ROM avy amin'ny chef Auras76 ho an'ny Sony Xperia Z, miorina amin'ny rindrambaiko ofisialy farany ofisialy Sony ary feno ny fanaingoana sy ny fiasa.
Samsung Galaxy S4, sary misy rafitra azo alaina
Izahay dia efa manana ny fanary ny rafitra na ny sary feno an'ny rafitra Samsung Galaxy S4 ho alaina mivantana.
Androany izahay manome anao ny JB eXperience ™ v2 an'ny Divaksh ho an'ny Sony Xperia U, miorina amin'ny rindrambaiko ofisialy farany ofisialy Sony ary feno ny fanamboarana sy ny fiasan-dalambe.
Samsung Galaxy S, tsunami X rom vaovao farany 4.7
Efa ananantsika eto ny kinova farany an'ny iray amin'ireo romana mahomby indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny Samsung Galaxy S, ny andiany V4.7 an'ny Rom Tsunami X.
Kitapo fanidiana Sony Xperia Z amin'ny Xperia P
Apetraho ao amin'ny Sony Xperia P anao ny efijery fanidiana izay entin'i Sony miaraka amin'i Jelly Bean ao amin'ny Sony Xperia Z, omeo fakan-tsarimihetsika kanto sy maoderina kokoa amin'ny finday ity ny findainao
Rom vaovao iray hafa ho an'ny Samsung Galaxy S3 miorina amin'ny kaody loharano AOKP ary miaraka amin'ny kinova Android 4.2.2.
Ampidiro ny mpandefa Sony Xperia Z amin'ny findainao Sony Xperia
Fampianarana ho an'ny fametrahana ny mpandefa ny Sony Xperia Z vaovao ho an'ny finday avoakan'ny Sony Xperia, izay ahafahantsika manamboatra ny solosainay.
Rom manaitra ny Samsung Galaxy S2 miorina amin'ny kaody loharano niavian'i Vanilla RootBox izay fangaro amin'ny tsara indrindra amin'ny Cyanogenmod sy AOKP.
Ampidiro ny Beats Audio amin'ny Xperia P sy Xperia U
Androany izahay manome Mod anao ho an'ny audio an'ny Xperia, izany dia Dre's Beats Audio izay ahafahanay milalao miaraka amin'ny ekipara mba hahazoana feo tsara
Androany dia mitondra ny Recoba Xperia Curiosity v2.2 ROM ho an'ny Sony Xperia T izahay, miorina amin'ny rindrambaiko ofisialy farany Sony Jelly Bean ary feno fanaingoana.
Samsung Galaxy S3, fanavaozana tsy ofisialy ny Android 4.2.2 amin'ny alàlan'ny rom masaka
Rom miasa voalohany tanteraka ho an'ny Samsung Galaxy S3 izay ahafahantsika mankafy amin'ny fomba tsy ofisialy ny tombontsoa azo avy amin'ny Android 4.2.2
Androany izahay mitondra anao ny Jelly cream Xperia Z style 2.5 avy amin'i Arthur_1 ho an'ny Sony Xperia P, miorina amin'ny rindrambaiko ofisialy farany ofisialy Sony ary feno fanaingoana.
Samsung Galaxy S, rom Tsunami 4.6 Android 4.2.2 fanavaozana ny 14 martsa
Fanavaozana vaovao ny ts Tsunami X 4.6 miaraka amin'ny Android 4.2.2 ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000
Xperia Z, Root ary fanarenana
Fampianarana hamongorana haingana sy mora ny Sony Xperia Z. Amin'izany no ahafahantsika mametraka mods isan-karazany, manamboatra backup, mametraka rom, ary zavatra maro hafa.
Androany dia entinay anao ny Total Xperia V2 ROM an'ny Total Xperia Team ho an'ny Sony Xperia U, mifototra amin'ny firmware an'ny Sony ofisialy farany sy feno fanaingoana.
Androany dia mitondra ny DevSxSTeam ROM NatureXperiaV3 ho an'ny Sony Xperia S izahay, miorina amin'ny firmware firmware 6.1.A.2.55 an'ny Sony ofisialy farany, feno fanamboarana io.
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X4.5 vaovao farany 9/3/13
Fampivoarana vaovao an'ny Team Tsunami X rom miaraka amin'ny Android 4.2.2 ary miorina amin'ny kaody AOKP ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000
Xperia T, Root ary fanarenana miaraka amin'ny Jelly Bean
Fampianarana hamongorana sy hametahana fanarenana amin'ny Sony Xperia T anao miaraka amin'ny Jelly Bean Miaraka amin'izany dia afaka mametraka mods isan-karazany isika, manamboatra backup, mametraka roms.
Rom farany an'ny ekipa Team Remics-JB ho an'ny maodely Samsung Galaxy S tsy misy afo GT-I9000
Xperia S, Root ary fanarenana
Fampianarana hanesorana sy hametrahana sitrana amin'ny Sony Xperia S amin'ny fomba tsotra. Amin'izany dia afaka mametraka mods isan-karazany isika, manamboatra backup, mametraka roms.
Androany aho manolotra anao rom romotra iray nalaina tao amin'ny forum HTCmania ho an'ny modely Samsung Galaxy S2 GT-I9100. Ny HCTRom V6.1 miaraka amin'ny Android 4.1.2 Jelly Bean
Samsung Galaxy S3, Rom Purelook HD amin'ny fomban'ny Xperia Z
Rom iray manaitra amin'ny fomban'ny Sony Xperia Z ho an'ny Samsung Galaxy S3.
Xperia U, Root ary fanarenana
Fampianarana hanesorana sy hametrahana sitrana amin'ny Sony Xperia U amin'ny fomba tsotra. Amin'izany dia afaka mametraka mods isan-karazany isika, manamboatra backup, mametraka roms.
Xperia P, Root ary fanarenana
Fampianarana hanesorana sy hametrahana sitrana amin'ny Sony Xperia P amin'ny fomba tsotra. Amin'izany dia afaka mametraka mods isan-karazany isika, manamboatra backup, mametraka roms.
Samsung Galaxy S, Ubuntu OS Rom voalohany
Eto izahay mba hizaha toetra ilay rom vaovao miorina tanteraka amin'ny rafitra fiasan'ny Canonical Ubuntu OS vaovao ho an'ny Samsung Galaxy S GT-I9000.
Seranana Vanilla RootBox Android 4.2.2 ho an'ny Samsung Galaxy S
Fahagagana marina an'ny RootBox vanilla cover rom ho an'ny Samsung Galaxy S, miaraka amin'ny Android 4.2.2 sy PIE Control
Vanilla RootBox, Roms Android 4.2.1 azo alaina amin'ny fitaovana isan-karazany
Vanilla RootBox dia iray amin'ireo ekipa fampandrosoana Android malaza indrindra izay azontsika jerena amin'ny resaka ROM ho an'ny fitaovana Android
Samsung Galaxy S3, Rom Vanilla RootBox Android 4.2.1 miaraka amin'ny PIE Control
Iray amin'ireo romana tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny Samsung Galaxy S3, Vanilla RootBox miaraka amin'ny Android 4.2.1 ary PIE Control.
Ny CRom Mix V6 dia rom miaraka amin'ny Android 4.2.2 ho an'ny Samsung Galaxy S miaraka amina fomba milamina mitovy amin'ny firmware voalohany an'ny Samsung Galaxy S3
Ampidiro ny ROM stock amin'ny Xperia anao amin'ny Flashtool
Fampianarana handefasana ROM stock na hametahana azy amin'ny Sony Xperia miaraka amin'ny fitaovana Flashtool. Fampianarana haingana sy mora.
Androany dia manolotra ny fomba fanavaozana ny maodely Samsung Galaxy S3 GT-I9300 amin'ny Android farany, 4.2.1 aho
Samsung Galaxy S, Rom Galaxy Nexus Android 4.1.2 RC2 avy amin'i Elitemovil
Fampivoarana vaovao an'ny rom tsara indrindra amin'izao fotoana izao ho an'ny Samsung Galaxy S, ny RC2 an'ny Galaxy Nexus avy any Elitemovil, Android 4.1.2
Samsung Galaxy S, Ahoana ny fanovana ny dpi ao amin'ny rom Elitemovil rom (RC1 sy RC2) farany
Fampianarana tsotra misy sary ary tsikelikely hanovana ny dpi ao amin'ny kinova romana Elitemovil rom RC1 sy RC2 farany ho an'ny Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2.1 port del Nexus S RC1 avy amin'i Elitemovil
Androany dia te hizara aminareo rehetra ny Android 4.2.1 Rom tsara indrindra aho fa nanam-bintana hanome ny Samsung Galaxy S, ny andiany RC1 an'ny elitemovil
Efa misy azontsika alaina ho an'ny Samsung Galaxy S ilay romana andrasana indrindra amin'izao fotoana izao, dia ny an'ny Team Tsunami X 4.2 miaraka amin'ny Android 4.2.1
Samsung Galaxy S, fanangonana modem
Lisitry ny modem feno ho an'ny Samsung Galaxy S, manan-kery ho an'ny ROM rehetra miorina amin'ny MIUI na Cyanogenmod.
Iray amin'ireo romana tsara indrindra ho an'ny modely Samsung Galaxy SCL GT-I9003 ary koa torolàlana momba ny fametrahana sy fampidinana.
Fomba fametrahana sy fisintomana ny kinova vaovao an'ny Android 4.2.1 rom tsara indrindra ho an'ny Samsung Galaxy S, ny RemICS JB V2.0
Samsung Galaxy S2, Rom SuperNexus V2.0 manangana 1 Android 4.2.1
Ny Rom SuperNexus V2.0 ho an'ny Samsung Galaxy S2 dia iray amin'ireo ROM farany navoaka tao amin'ny xdadevelopers miaraka amin'ny Android 4.2.1
Avy amin'i HTCmanía sy avy am-pelatanan'i Fenixer no itondrana an'io romana mahagaga an'ny modely Samsung Galaxy S3 GT-I9300 miaraka amin'ny Android Jelly Bean 4.1.2
Samsung Galaxy S, Rom Vortex 0.5 avy amin'ny Team Tsunami Android 4.2.1
Ny Vortex 0.5 rom no ampahany farany amin'ny ekipa Team Tsunami mihazakazaka Android 4.2.1 ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000.
Fanavaozana vaovao an'ity rom manaitra ity amin'ny Android 4.2.1 ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000.
Rom Android 4.2.1 avy amin'ny ekipa Team RemICS-JB ho an'ny modely Samsung Galaxy S GT-I9000.